मंसिरमा विहे नगरे पनि एल्वम त ल्याउदै छु
Warning: getimagesize(article_uploaded_files/1f28516237_b.jpg): failed to open stream: No such file or directory in /home4/b1soft/public_html/nepalkoreanews.com/page.php on line 154
अहिले तेस्रो एल्वमको तयारी गर्दैछु साथै कार्यक्रमहरुमा पनि व्यस्त हुँदै आएको छु
। यी बाहेक स्कुलमा पनि पढाउँने गरेकी छु । मंसिरको पहिलो साता एल्वम ल्याउने सोच थियोतर
काम गर्दै जाँदा भ्याएन मंसिरको अन्तिमतिरचाहीँ पक्कै ल्याउँछु ।
यति व्यस्त रहेर पनि पहिलेको जस्तो तपाइँको चर्चा छैन नि ?
हो पहिले जस्तो त छैन तैपनि म हराएकी छैन । चर्चा सधैं एकनास हुँदैन । काम अनुसारको
चर्चा चल्ने हो । पहिला जस्तो म जस्तो पायो उस्तै कार्यक्रम गर्दिनँ । मैले कार्यक्रम
गर्नुपर्दा स्थान र पारिश्रमिमा चित्त बुझ्नु पर्छ । यी दुईमा चित्त बुझेन भने म सम्झौता
गर्दिनँ । त्यसैले पनि मेरो चर्चा पहिलेको भन्दा सेलाएको हुनसक्छ । तैपनि मलाई केही
छैन । र म चर्चाको भोको पनि होइन ।
नयाँ-पुराना कस्तो गीत चर्चित छन् ?
मेरा स्रोताका लागि पुरानो पनि नयाँ नै लाग्ने छ भन्ने मलाई लागेको छ । त्यसैले मलाई
चर्चामा पुर् याउँने मेरा पुराना गीतहरु प्रस्तुत गर्न मन पराउछु । परेलीमा छौं कि
चोरेर लग्यौं च्याङ्बा है च्याङबा लगायतका गीतहरु चर्चित छन् ।
तपाइँको तिहारचाहिँ कसरी वित्यो ?
घर परिवारसँग रमाइलो गरेर तिहार मनाएँ । भाई नेपालमा नभएकोले भाई टीका लगायँने कार्यक्रम
भएन । मेरो भाई इङ्ल्याण्डमा छ । त्यसैले अरु दाजुभाईलाई बोलाएर भाइ टीका कार्यक्रम
गर्ने जाँगर पनि चलेन । मलाई जुवा तास खेल्नु मन पर्दैन । रमाइलोकै लागि खेल्नु पर्दा
म पैसा विना मात्र तास खेल्छु । यो तिहारमा पनि मैले पैसा विना नै रमाइलोको लागि तास
खेलेर रमाइलोसँगै टाइमपास गरेकी थिएँ ।
उमेर पनि यही हो र मंसिर पनि लाग्दैछ । सोच के बनाउँनु भएको छ ?
उमेर भएर पनि तत्काल विवाहको सोच बनाएकी छैन । आफूले मात्र सोच बनाएर पनि हँुदैन ।
लगन नै जुर्नु पर्दोरहेछ । अहिले म जे छु ठिकै छु जस्तो लाग्छ । सिङ्गल छु र नै मेले
स्वतन्त्र रुपमा आफ्नो प्रस्तुती देखाउन पाइरेकी छु । यो मंसिरमा विहे नगरे पनि एल्वम
त ल्याउदै छु नि । यो सालको मंसिरको मेरो योजना यही नै हो ।